IChina iTshitshisiweyo kwiNkqubo FUT yeCiling Ceiling Grid kunye nabavelisi | Beihua
Inkqubo emiselweyo ye-FUT Ceiling Grid
1. Igreyidi yophahla ineempawu zokubonisa ubumswakama, anti-corrosion kunye nokungaphili.
2. Inokuchaneka okuphezulu, eyona nto iphambili / umnqamlezo ungqongqo kwaye iyabambelela ngokuqinileyo.
3. Inomthamo oqinileyo wokuthwala, akukho deformation okanye ukuqhekeza.
4. Ufakelo luyakhawuleza, longa ixesha lokufaka kwaye linciphisa iindleko zabasebenzi.
Iseti epheleleyo yenkqubo yokumiswa kwephahla iqulathe i-tee eyintloko, i-tee yentsimbi ende, i-tee enqamlezileyo kunye ne-angle angle. I-tee eyintloko ngumthi ophambili wenkqubo yophahla. Ubude be-tee eyintloko ngokubanzi buyi-3600mm okanye iinyawo ezili-12 ubude. I-tee ende yomnqamlezo okanye i-tee emfutshane idityaniswe kwi-tee eyintloko ngokusebenzisa iiplagi kuzo zombini iziphelo zayo, ngaloo ndlela yahlulahlula iprojekthi yonke yephahla kwiigridi ezahlukeneyo zesikwere esilinganayo. Isetyenziselwa ukufakelwa kwesilinganisi sezinto zesilinganisi esinebhodi enezimbiwa, ibhodi ye-pvc ye-gypsum, i-aluminium siling, njl njl., Kwaye idlala indima yokuxhasa kunye nokuhombisa kuyo yonke inkqubo yophahla.
1. Umsebenzi wokwamkelwa osisiseko kufuneka ugqitywe ngaphambi kokuba kwakhiwe ithambo lokuhombisa kunye nepeyinti yomgangatho wokudibanisa iphaneli. Ukufakwa kwepaneli yokugubungela i-gypsum kufuneka kwenziwe emva kophahla, ukuphahla kunye nodonga lodonga lugqityiwe.
2. Iimfuno zoyilo xa udonga lokwahlulahlula lunamabhanti omqamelo womgangatho, ulwakhiwo lwebhanti yomqamelo lomgangatho kufuneka lugqitywe kwaye lufikelele kwinqanaba loyilo ngaphambi kokufaka ithambo lokupeyinta.
3. Ngokwendlela yoyilo, imizobo yokwakha kunye nesicwangciso sezinto ezibonakalayo, jonga zonke izixhobo zodonga lokwahlulahlula kwaye ugqibezele.
4. Zonke izixhobo kufuneka zibe neengxelo zokuhlola ezibonakalayo kunye nezatifikethi.
Kule minyaka idlulileyo, ibisetyenziswa kakhulu kwiihotele, kwizakhiwo zesitalato, kwizikhululo zabahambi, kwizikhululo, kwiindawo zemiboniso, kwiindawo zokuthenga, kwimizi-mveliso, kwizakhiwo zeofisi, kulwakhiwo ngokutsha kwezakhiwo ezindala, umhombiso wangaphakathi, uphahla kunye nezinye iindawo.
I-3600mm / 3660mm
Tee emnqamlezweni ende
Tee emfutshane yomnqamlezo
Edlulileyo: Inkqubo ye-White Ceiling Grid
Okulandelayo: INkqubo emiselweyo yokuSika i-Black Ceiling Grid
Ipayipi loboya boLitye
Itafile yeGlasi yeTaytile yeTyibhile